I-Alex Ferguson Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts
ikhaya UMPHATHI weFOOTBALL I-Alex Ferguson Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts
I-LB ibonisa iNqaku elipheleleyo loMphathi webhola owaziwa kakhulu ngeSiza; 'Fergie'. Ibali lethu le-Alex Ferguson yabantwana kunye ne-Untold Biography inqaku likuleta i-akhawunti epheleleyo yeziganeko eziphawulekayo ukususela ngexesha lobuntwana kuze kube yimini. Uhlalutyo lubandakanya ibali lobomi bakhe phambi kobuqili, ubomi bentsapho kunye ne-OFF kunye ne-ON-Pitch eyaziwayo into eyaziwayo ngaye. Ngoku kungenasinye i-adieu, Qalisa.
I-Alex Ferguson Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts: Obomi bakwangoko
USirks Alexander Chapman Ferguson wazalelwa eGlasgow Scotland, ngomhla we-31st kaDisemba 1941 ngu-Alexander Beaton Ferguson (uyise) no-Elizabeth Hardie Ferguson (unina).
Wazalelwa kwikhaya likagogo kwiShieldhall Road eGovan kodwa wakhulela kwishumi elinesithathu kwi-667 Govan Road (eyaye yachithwa). Njengomntwana, wayehlala nabazali bakhe kunye nomntakwabo uMartin. Idolophu yakhe, iGovan yindawo yokuhlala eseGlasgow, eScotland. Wonke umntu ohlala edolophini noyise kaFerguson wayenethuba eliphezulu lokungena kwinqanawa yokwakha ishishini. Ngokwenene, wayehlala kwindawo yolwakhiwo lwemikhumbi njengomntwana.
Ukukhula, u-Alex waya kwiSikolo sasePrayimari saseBromloan Road kwaye kamva uGovan High School, kwaye ixhasa iklabhu yebhola yebhola yebhola. Nangona kunjalo, kukho into eyahlukileyo ngaye ngokungafani nabanye abantwana bakhe ubudala. Wayengumfana oyingqiqo kodwa wayengenanto inomdla kwizifundo, kwaye wayenomdla wokudlala ibhola.
Wakhetha ukukhaba ibhola yebhola kunye nomntakwabo omncinci, uMartin, kunye nabahlobo ngeendlela eziphakathi kwezindlu zokuhlala, kwaye kunye noncedo olusuka kubawo, waqala ukuba yintente ethembisayo.
I-Alex Ferguson Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts: Ubomi Bentsapho
UFergie wayevela kwiintsapho ezihluphekileyo. Wayenentsapho ehluphekayo kodwa eyonwabileyo eqala ubomi kwindawo yase-Govan yinqanawa yaseGlasgow. Uyise wakhe akazange akhonze nantoni na ephakamileyo ngaphambili kwinqanaba lokwakha iinqanawa. Wahlala kwindawo yebhola ekhatywayo ukuze aphile esamnika umvuzo omncinci.
Nangona kwakuyiminyaka emithandathu ekuzalweni kukaAlex Ferguson uAlexander Beaton Ferguson washiya umdlali webhola lebhola ngenxa yokufumana ithuba lokufika kwishishini lokwakha iinqanawa zaseGlasgow. Waguquka waba ncedisa . Ngeli xesha wayenethemba kwaye ngoku unako ukumondla uAlex osemncane (ngezantsi), umntakwabo nonina.
Ngelishwa u-Alex Ferguson, bobazali bakhe babulawa ngesifo esifanayo (umhlaza wamaphaphu) phambi kobudala babo be-67 engaphantsi kweminyaka yobudala beBrithani. Nangona kunjalo, bobabini babeshushu. Uyise ka-Alex Ferguson wabulawa ngumhlaza wamaphaphu ngexesha le-66 ngonyaka we-1979. Unina kaFerguson unina uElizabethe naye wafa ngumdlavuza wamaphaphu ngexesha le-64 ngonyaka we-1986. Ukufa kwakhe kwenzeka xa wayesemva kweeveki ezintathu emva kokuqeshwa kwakhe njengomphathi weManchester United. Ukufa kwakhe ngokungalindelekanga kwashiya umphathi omtsha ngokugqithiseleyo kunye neentlungu ezinkulu ngeenyanga. Yayiyimbangela yokuqala kwakhe kunzima kwi-career yakhe yokuphatha i-Manchester United. Isizathu sokuba kutheni wayedla. Kwakuyixesha elide losizi kunye "Impembelelo ephazamisayo" ukukhulula abazali bobabini kwisifo esifanayo (umhlaza wamaphaphu).
UFergie walwa nokukhokela urhulumente waseScotland 'Tsonga umdlavuza kuqala' Iphulo elithe lafumana i-£ 30million. U-Alex Ferguson wavuma ukuphambi kwephulo ngenxa yeentliziyo zakhe kunye nokufumana umyalezo ukuba ukufumanisa kwangaphambili kunokunika abantu "Ixesha elongezelelweyo" ukuchitha kunye nosapho.
Uthe: Ndiyakhumbula ndixelelwa ukuba abazali bam benomdlavuza wamaphaphu. Ndiyakhumbula kwakhona umhla owamxelela ukuba umama wayeneemini ezimbalwa zokuhlala. Ndafika esibhedlele waza ugqirha wandihlala phantsi, wandixelela ukuba unomdlavuza wamaphaphu, wathi: "Unentsuku ezine ukuhlala". Wa ye lungile. Wafa kanye iintsuku ezine emva koko. Ukufa kwakhe kunye nexesha kwakungenye yezinto eziyingozi kunokuba ndibone. Kodwa izinto zihluke ngoku. Le mihla, umhlaza wamaphaphu akufanele ube isigwebo sokufa. Ukufumanisa kwangaphambili kunokulondoloza ubomi bakho kwaye kukunike ixesha elide lokuchitha kunye nosapho lwakho. Ndandifuna ukubandakanyeka kule phulo njengoko ndilahlekelwe ngabazali bam bobabili ukuba banomdlavuza wamaphaphu. Ndiyazi ukuba umdlavuza ochaphazelayo unokuthi ube neentsapho. Ngoko kunokuba ningenzi nto malunga nalo, ndiyakhuthaza nabani na oxhalabileyo ukuba ahlolwe ngokukhawuleza. "
I-Alex Ferguson Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts: Usapho kunye noBomi Ubomi
U-Alex Ferguson wayehlala eMzantsi waseManchester ngethuba lobudala. Kwakuloo mzi wadibana nomfazi wakhe, uCathy. Bobabili batshata ku-1966.
Umtshato wabo wabusiswa ngokukhawuleza ngeziqhamo. Indodana yokuqala yokuqala uMarko wazalwa ngo-1968. Le minyaka emibini emva komtshato wabo.
Babelinde iminyaka emine ngaphambi kokuba babe nolunye. Nge-9th Febhuwari, i-1972, uAlex Ferguson kunye nomfazi babenezinye iindidi ezithandekayo ezibizwa ngokuthi nguJason noDarren.
U-Alex Ferguson uye wachazwa njengomyeni onomdla ngumfazi wakhe uCathy. Wayemthanda kumhla owodwa. Ungomntu ongajongi ukuba iindima zabasetyhini ekhaya. Ngamanye amaxesha wayencedisa kuyo yonke indlu yokuqeshisa kuquka nekhitshi.
Abathandekayo babona abantwana babo bekhula bevuya. UAlex Ferguson, "Usapho aluyinto ebalulekileyo. Yinto yonke. "
Umtshato wabo uchazwe njengenye yeyona mpu melelo e-UK. Enye ininzi ibonile ukuba ifanelekile. Ubomi babo bomtshato obudlulileyo buye behlala ngaphezu kwe-51 iminyaka.
I-Alex Ferguson Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts: Abantwana Abakhulayo
Unyana omdala ka-Alex Ferguson uMarko wayengumphathi wePeterborough United kunye nowayengumdlali webhola.
Omnye weamawele ogama linguDaren ufaniswe apha ngezantsi edlalwa phantsi koyise ka-Manchester United ukusuka ngonyaka we-1990 ukuya kwi-1994. Ngoku ulawulayo KwiDoncaster Rovers njengoko ngexesha lokubhala.
Elinye iwele, uJason Ferguson ugijimela ibutho lebhola lebhola 'Elite Sport'oye wabambisana noManchester United ngexesha lobawo bephethe le club. Naye ugijimela inkampani yolawulo lwezenzakalo.
I-Alex Ferguson Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts: Ingxaki kunye noDavid Beckham
Kucacile ukuba uFerguson ubheka uDavid Beckham ukuba abe ngenye yeentlondi zakhe ezinkulu. Wayemthanda iBrakkham; Wayecinga ngaye njengendodana kwaye wayenomdla wendlela awayeyiphupha ngayo iphupha lakhe lebhola; ngenxa yokunyamezela kwakhe, ukunyamezela kunye nomnqweno wokubonakalisa abantu abangalunganga. Kodwa uFerguson wayekholelwa ukuba u-Beckham wayelibale into eyenziwe yinkwenkwezi kwaye, ngokugqithiseleyo, wayengafuni ukusebenza nzima kunzima.
Kwi-2003, uFerguson wayebandakanyeka egumbini lokugqoka kunye nomdlali waseMelika uDavid Beckham. Utshilo uBeckham ngokungaphumeleli kwi-Arsenal njongo e-Old Trafford. UFerguson usolwa ngokukhanda ngamatye ebhola ebhokheni, ebetha umdlali ebusweni waza wabangela ukulimala kuBrakkham.
UDavid Beckham wenza into ethile. Wavumela ukuba isilonda sithotywe kwaye sidliwano-ndlebe ngolu suku olulandelayo. Emva kokuqwalasela izenzo zakhe, uFerguson wenza isigqibo sokumthengisa. Wayekholelwa ukuba uBackham wayeva ukuba uye waba mkhulu kuneye kunye neqela.
UFerguson wake wabhala ukuba u-Beckham ubenobungozi bakhe ubuso bamenza waba udumo. Ngokutsho kwakhe 'Wayephethe isigqibo esiphuthumayo sokuphinda adlulise udumo kude nentsimi emva kokulimala'.
Ubhala kwakhona ukuba akukho "Isizathu sebhola" ukuba uBackham aye eLos Angeles. 'Watshatyalalisa ithuba lokuba ngama-endle endala. uthi uFerguson.
I-Alex Ferguson Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts: Ingxaki kunye noRoy Keane
USir Alex Ferguson ubonisa umfanekiso kaRoy Keane, owayengumthetheli wakhe kunye nomnumzane, njengomntu ongenangqondo kwaye wesabisayo, okwazi ukwesaba naye kwaye, ngokuqinisekileyo, abadlali abaninzi ngaphakathi egumbini lokugqoka. UKeane wayilawula ngentsimbi yentsimbi kunye nolwimi oluhlaselayo, apho uFerguson wathi yinto enzima kakhulu emzimbeni wakhe.
Ukuwa kwabo kwaba yinxalenye ye-Old Trafford isintu kunye noFerguson bayayifinyelela ekunciphiseni kwamandla aseKeane kwintsimi kunye nokukhungatheka ayezijonga ngenxa yoko.
U-Keane wayevutha ngumsindo malunga nento awayecinga ukuba wayeyifumene kwindawo yokuqala yangaphambi kwexesha lonyaka kwindawo yoqeqesho yaseManchester United. Uqhubeke wanika into eyayibizwa ngokuba 'ludliwanondlebe oludumisayo kwi-MUTV apho wagxeka uFerguson kunye nabaninzi beqela lakhe eliquka uKieran Richardson, Darren Fletcher, Alan Smith, Edwin van der Sar noRio Ferdinand.
UKeane wacetyisa ukuba iqela libukele udliwano-ndlebe ukuze bakwazi ukuzenza iingqondo zabo kunye nolwalandelayo olwalubangelwa yimpikiswano phakathi kwakhe kunye nabadlali abaninzi, kunye noFerguson. Kwakudingeka asebenze kwaye wuleza wanyanzelela ukuhlawulwa kwekhontrakthi kaKeane kunye nokuhamba kwakhe kwiCelt.
UFerguson ubhala ukuba uKeane wayedlala ukuze ambone uxolo kodwa ubuhlobo buye bubuya bubi emva kokuvakalisa izimvo zomphakathi phakathi kwababini.
I-Alex Ferguson Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts: I-issue neRuud
U-Alex Ferguson wayenenkxalabo kunye noRuud awathethayo ngenxa yokunyaniseka kwakhe. Ukungqubuzana kwabo kwaba isizathu sokuba uRusud van Nistelrooy washiya iManchester United phantsi kweemeko ezinobungozi kwi-2006. Impikiswano yabo yaqala xa uRuud efungela ngokusobala waza wamqalekisa emva kokuba ebhejiswe ngexesha lokugqibela kweCarling Cup ngaseWigan.
UFerguson uthi akazange alindele ukuthengisa iMartinal kodwa ukuziphatha kwakhe ngexesha lokunyanzelisa isandla sakhe. Nangona kunjalo, uVan Nistelrooy wenza umnxeba kuFerguson ngaphandle kwe-blue kwiJanuwari 2010 ukuxolisa ngokuziphatha kwakhe.
I-Alex Ferguson Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts: Ukukhumbula Abadlali Bemiboleko
Emva kokutshatyalaliswa kwendoda yakhe yomfana, uDarren Ferguson Preston North End, UFerguson ngokukhawuleza wakhumbula abadlali ababoleka imali uRitchie De Laet, uJoshua King kunye noMatty James wasePreston phantsi kwenkqubo yayo yokulawula entsha. Kamva wachaza ukuba yinto yesicelo somdlali ukuba angabuyi ku-Preston emva kokutshintsha komphathi. Umphathi weSixeko saseStke Tony Pulis kulandelwa kungekudala emva kokukhumbula abadlali ababengumdlali waseManchester United ukusuka e-Preston ngokunjalo, echaza isidingo sokuba abadlali bancedise ixesha elide leqela lakhe.
I-Alex Ferguson Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts: Emva kokuba kuvunyelwe iGareth Bale ukuya eSlip Away
USir Alex Ferguson akaze akhathazeke kakhulu ngabantu ababalekayo kodwa umphathi waseManchester waseMicrosoft wenza okungafaniyo Gareth Bale, ukuvuma ukuba wayephumile kumdlali.
Ingxelo evela eManchester United i-Scouts ibonise ukuba uBel uhlangabezane nesicelo sikaFerguson sokuba ngumdlali onqamlekileyo onokuthi angene esikhundleni sikaRyan Giggs. UFerguson ngokwakhe wenza isicelo sokuba ama-scouts afake uBale phambili kuye. Nangona kunjalo kukho into eyenza ukutshintshelwa kwephulo. U-Alex Ferguson emva kokubona ekhalaza kakhulu.
I-Alex Ferguson Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts: Umsebenzi wokuPhatha kwiSishwankathelo
UFerguson oneminyaka eyi-32 ubudala waqala umsebenzi wakhe wokuphatha e-East Stirlingshire kwi-1974, okwenza umphumo wokukhawuleza wakhe ngumlilo, ukhuphiswano. Wadlulela eStrat Mirren emva kweenyanga ezimbalwa, kwaye nangona ekhokela abaNgcwele kwiCounters yaseScottish First Division e-1977, waxoshwa ngonyaka emva kokuphula isivumelwano.
Kwakunjalo neAberdeen ukuba uFerguson wamisa igama lakhe njengomphathi ohamba phambili. Ukuqhaqha umqhudelwano weCelt-Rangers, uFerguson ukhokela i-Aberdeen kwiintlanzi ezintathu zeScottish Premier League, ezine iCoscow Cup, i-League Cup, iNdebe yeFlabathi kunye neNdebe ye-European Cup Winners ngaphezulu kwee-season.
U-Alex Ferguson uthatha njengomphathi weqela elidumiweyo kodwa engaphantsi kweqela laseManchester United ngoNovemba 1986. Umsebenzi wakhe wachazwa ngomgca emva kokugqithisa ngokukhawuleza kwexesha le-1989-90. Ikhefu lakhe lokuqala elihluphekayo ngenxa yokufa kukaMama. Wachitha ixesha elide ebuhlungu umama wakhe owafa ngumhlaza womlenze owawuphantse ulahlekelwe ngumsebenzi wakhe. Ngethamsanqa kuye, iidemon ezibomvu zazibonela kwakhona kwaye zanqoba i-FA Cup ngexesha lokupasa kwayo. Oko kwamgcina ngomsebenzi wakhe. Umtya weempumelelo olandelwayo NAKUBE abanye bathi bayimbali.
I-Alex Ferguson Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts: Lakhe ilifa
Umfanekiso ozobhedu lweFerguson, owenziwe ngumdwebi waseScotland UFilipu Jackson, yavulwa ngaphandle kwe-Old Trafford kwi-23 Novemba 2012.
Ngo-14 Okthoba i-2013, uFerguson waya emkhosini apho umgwaqo osondele kufuphi ne-Old Trafford wabizwa kwakhona Ukufikelela kwamanzi ukuba Sir Alex Ferguson Way.
Moreso, Ibinzana "Ixesha elimnandi" iqulunqwe nguFerguson ngokubhekiselele kumanqanaba okugqibela omgangatho wokuncintisana kweligi sele ifakwe kwi Dictionary iColins English kwaye i I-Oxford English Dictionary.
I-Alex Ferguson Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts: Abaphathi abazalisayo
Abadlali abaninzi baseFergguson abaye baqhubeka bebaphathi bebhola ngokwabo, kuquka uTony Fitzpatrick, uAlex McLeish, uGordon Strachan, uMark McGhee, uWillie Miller, uNeale Cooper, uBryan Gunn, uEric Black, uBryan Robson, uSteve Bruce, uMark Hughes, uRoy Keane , UPaul Ince, uChris Casper, uDarren Ferguson, u-Ole Gunna Solskjær, uHenning Berg noGary Neville.
I-Alex Ferguson Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts: ipolitiki
Wanikezwa ubuqili baseBrithani kwi-1999 ngenxa yegalelo lakhe kumdlalo webhola. Kwi-1998, uFerguson wachazwa ngoluhlu lwababani bemali abazimeleyo kunabo bonke Party Labor. Uyi-socialist echazwe ngokwayo kunye nomxhasi weBasebenzi bonke. NgoJanuwari 2011 Graham Stringer, iPhalamende loMsebenzi kwi Manchester kunye nomxhasi waseManchester United, wabiza uFerguson ukuba enze oontanga. Ukuba oku kwenzekile, kuya kwenza uFerguson owokuqala okanye umqhubi webhola okanye umphathi webhola ukuba ahlale kuyo KwiNdlu ye eNkosi. Umgca kunye nomnye uMphathiswa waseManchester Work UPaul Goggins phinda le fowuni emva kokuba uFerguson wamemezele umhlalaphantsi wakhe ngoMeyi 2013. Nangona kunjalo, imithombo engaziwa ngegama Daily Mirror iphephandaba lathi ku-1 Agasti 2013 ukuba uFerguson wamkele.
Ngexesha 2014 Ukuzimela kokuzimela kweScotland, UFerguson wayengumsekeli wezwi kunye nomxhasi Elingcono Iphulo elasekela iSkotland lisele liyingxenye ye-United Kingdom. Wayegxeka National Scottish Party, kunye nenkokeli yalo Alex Salmond, ngenxa yesigqibo sabo sokungabandakanyi amaScots ahlala ngaphandle kweSkotland, kodwa ngaphakathi kwe-United Kingdom yonke, ngokuvota kwireferensi.
I-Alex Ferguson Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts: Education
Kwi-2009, uFerguson wathola iDktrar Doctorate kwi-Business Administration ukusuka YaseManchester Metropolitan University.
Kwakuyi-degree yesibini eyayifumana eyunivesithi, emva kokufumana i-master masters kwi-1998.
IDiskritish Diary Diary
Iincwadi zikaJulian Nagelsmann Ibanga lokuKhula loBuntwana kunye ne-Untold Biography Facts
I-Brendan Rodgers Ibali lokuKhula kobuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold
U-Ernesto Valverde Ibali leNkwenkwe yabantwana kunye ne-Untold Biography Facts
I-Massimiliano Allegri Childhood Indaba I-Untold Biography Facts
U-Ole Gunnar Solskjear Ibali leNkwenkwe yabantwana Plus Untold Biography Facts
I-Santiago Solari Ibantwana Ibali Plus Untold Biography Facts
Nuno Espirito Santo Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts
IJurgen Klopp Ibali leBantwana I-Untold Biography Facts
Umhla oguqulwe: Matshi 10, 2019
Iindaba zeJoachim eziphantsi koBantwana kunye ne-Untold Biography Facts
I-Diego Simeone Ibantwana Ibali Plus Untold Biography Facts
Umhla oLungisiweyo: nge-26 kaJanuwari ngo-2020